IHOROMBE: EFA MIOMANA AMIN’NY FAMBOLEN-KAZO NY ZANDARIMARIAM-PIRENENA
On jan 9, 2020 9 963
Efa anao anatin’ny fanomanana tanteraka amin’ny fiatrehana ny taona fambolen-kazo ny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, ao amin’ny Faritra Ihorombe. Mitarika ny hetsika, fangadiana mialoha ny lavaka ho volena ny lehiben’ny Vondrotobim-paritra, ny kolonely Ramaminirina Solofoniaina. » Anisany manome hasina manokana ny tontolo iainana ny faritra iadidiako. Miezaka ny mitondra anjara biriky izahay anatin’ny zandarimariam-pirenena », hoy izy niresaka tamin’ny mpanao gazetinay.
Tsiahivina, fa nisy omaly ny fiaraha-mientan’ny mpitandro filaminana rehetra, ao Ihorombe, amin’izay fifanomezan-tanana ny hamboly hazo izay. Efa nialohavan’ny fambolena zana-kazo, natao ny volana novambra lasa teo ny hetsika. Miara-misalahy ny Tafika, ny Polisy, ary ny zandary. » Ankoatra ny resaka tontolo iainana, natao ihany koa ny hetsika indroa miantoana ireo mba hanamafisana orina ny firaisankinan’ny samy mpitandro filaminana eto Ihorombe« , hoy hatrany ny kolonely Ramaminirina Solofoniaina, nitondra fanazavana.
Fikarakarana ireo zana-kazo, hambolena ao amin’ny faritra Ihorombe. ( Sary: Zandarimaria Ihosy)
Marihina fa ny 19 janoary, ho avy izao no hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny taom-pambolena hazo eto Madagasikara, araka ny tapaka tamin’ny filankevitry ny minisitra, omaly. Any Tampoketsa, Ankazobe no hanatanterahana izany. Mandrindra ny asa manodidina izany ny minisiteran’ny tontolo iainana sy ny Fiadidiana ny Repoblika.
PRAIMINISTRA NTSAY CHRISTIAN: » MANANA ADIDY HO FAMERENANA NY FANDRIAMPAHALEMANA NY FIAROVAM-PIRENENA »
ASARAMANITRA 2020: NIARAHABA NY FILOHAM-PIRENENA MIVADY NY LEHIBEN’NY ANDRIMPANJAKANA